Gaafiin Oromoo Deebi’ee Laata? - Caboowanci.com-Oromia
Gaafiin Oromoo Deebi’ee Laata?
August 28, 2016 Nadhani	0 Comments
Gaafiin Oromoo deebi’ee laata kan mootummaan Wayyane sochii dhihoo kana Amaaraa keessati dhalateef muddamaa fi dhiphachaa kan jirtu? Mootummaan Wayyanee guyyaa lamaaf gaafa Kamisii fi Jimaata darbee walgahii guddaa godhee keessaa dhimmii naannoo Amhara itti dhalatee kun akka malee ishii sodachiisee jira. Amma tokko dandamachuudhaaf moo ogganoota tokko tokko keessaa ariyanii namoota duraan angoo irraa hariyyan amma moo as gara angootti deebisuuf qophaa’anii jiru.
Haa ta’uu malee yeroo ammaa kan itti mataan isaan dhukubaa jiru rakkoo naannoo sanatti dhalatee malee kan gaafii Oromoo gaafachaa jiru waan tokko itti dhagahamuu hin dandeenyee. Karaa ajjeechaatinis haa ta’uu karaa nama hidhuutin miidhaan guddaan durumaan kaassee kan naannoo Amaaraa harka keessa qabatanii jiru. Ammas yoo ta’ee gaafiin ummata Amaaraa akka tokko tokkon deebi’uufitti irrati hojjachaa jiru namoota tokko hariyyachuudhaaf qophaa’an illee.
Garuu gaafiin Oromoo gaafii ummata Amaaraa wajjins amma tokko adda ta’uu illee kan Ummata Oromoo kana halkan halkaniin mana irra deemuudhaan Ummata nagaa ajjeesaa jiru. Akka waliigalaatti Oromia hundaa keessati hidhatoonii Agazii mana irra deemanii halkan walkaa naminnii bakkaa ciisaa jirutti rasaasaa itti dhukaasanii ajjeesaa akka jiran beekamaadha. Kun moo beekaatuma ittin haaloo bahaa akka jiraniifi namoota tarii qabissoo kanaaf waa gumachuu danda’uu kan jedhan hundaa tokko tokkon mana irra deemanni ajjeesaa jiru.
Namoota kaan moo dhokisaadhaan karaa fi bakka adda addaa irrati nama hin beekamineefi akkaata hin beekaminnen ajjeesuu ummanni du’aa jira. Kanaafuu kan wa’ee Oromoo furmaata itti barbachuu irraa callisaanii ajjeesuu filatanii jiru. Dhugaa dhuma gaafiin Oromoo amma isaan angoo irraa hin buunetti deebi’uu akka hin dandeenyee beekamaadha. Garuu nama tokko ykn Ummata nagaa tokko gaafii abbaa biyyummaa fi gaafii angoo gaafatani jedhamanii ajjeefamuun hidhamuun fi reebamuun akkasumas kanaan bira darbuun kun ammas rakkoo fi badiinisa raawwachaa turaniif irra jiran irraa baratanii ofi qusachuu hin dandeenyee.
Yeroo dhuma ammaa kanatti 08/28/2016 hidhataan Agazi naannoo Harargee dhihaa, Choma fi Masala keessati namoota nagaa 7 ajjeesee nama 5 madeesee jira sa’aati 2 otuu hun guutiin. Kun egaa akkuman ibisuuf yaaletti gaafiin Oromoo kan deebi’aa jiru ajjeechaa fi hidhaa duwwaadha. Gochii kun amma yoomitti akka itti fufu hin beekamuu.
← በኦሮሞ ፕሮቴስት ተሰብሮ የነበረው የወያኔ ወገብ
IBSA EJJENNOO GUMII TOKKUMMAA ABBOOTII GADAA OROMOO →